admin – Shabakadda Amiirnuur
Mu’asasada Alkataa’ib waxay soo saartay Filim aad u qurux badan oo xambaarsan dhiiragelin iyo baraarujin, wuxuuna si gaar ah u khuseeyaa dhalinyarada Muslimiinta ee maanta indhaha ka daawanaya loolanka u dhexeeya xaqqa iyo baadhilka. Filimkaan ayaa ku baxaya illaa sedax luqadood waxaana lagusoo bandhigayaa dagaallo ay jihaadiyiinta Al Shabaab ay […]
Si weyn ayaa looga ciiday Magaalada Buq Aqable ee Gobalak Hiiraan halkaasoo ay ku tukadeen Slaadda Ciidul Fidriga Dadweyna Fara abdna oo si wanaagsan u soo lebistay. Saraakiila ka tirsan Xarakada Shababul mujaahidiin ayaa dadka Halkaa kula dukaday. Bulsadha aya ahaa kuw aad u faraxsan […]
Magaalada Ceelbuur ee wilaayada Islaamiga galgaduud ayaa si weyn looga dabaal dagay munaasabadda ciidul fidriga waxeyna bulshada magaalada iyo deegaanada hoostaga salaada ciida ku dukadeen fagaara ku yaala ceelbuur. Halkan Hoose Ka Daawo Sawirrada Ceelbuur Iyo Ciidul Fidriga.
Kumanaan ruux oo isuga jira qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ayaa saaka salaadda Ciidul fitriga 1442-da hijriyada waxay ku tukteen musallaha Sayid Muxamad Cabdulle Xasan ee deegaanka Kuunya Barrow wilaayada Shabeellaha Hoose. Haween, caruur da’ yar iyo dad waaweyn ayaa isugu yimid musallaha, waxaana ay ku labisnaayeen dhar […]
Magaalada Jilib ee xarunta Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka waxaa maanta si weyn loogu dabaal dagay munaasabada ciidul fidriga, Waxeyna bulshada magaalada salaada ciida ku dukadeen fagaaraha Ashahiid macalim aadam xaashi Allaah haka aqbalo. Halkan Hoose Ka Daawo Sawirrada Ciidul Fidriga Iyo Magaalada Jilib. 0 Share Calamada 14041 Posts 2 Comments Leave A […]
Sawirro: Degmada Aadan Yabaal Iyo Sida Looga Ciida Degmada Aadan Yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe ayaa kamid ah goobaha sida wanaagsan looga ciiday maalinta koowaad ee ciidul Fitri Al-Mubaarak ee sanadka 1442-da hijriyada. Dadweynaha degan degmada Aadan Yabaal oo ay horkacayaan xubno katirsan maamulka islaamiga ah iyo […]
Sawirro: Magaalada Saakow Oo Si Heersare Ah Looga Ciiday.
Kumannaan dad ah ayaa Maanta oo ah 1 Shawaal 1442 ee Hijriga kuna beegan 12 05 2021 isugu soo baxay Musalle weyn oo ku yaala degmada Saakoow ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka kuwaas halkaas ku tukaday labada rukco ee salaadda Ciidul Fidriga. Dadka reer Saakow ayaa ciidan ka […]
Sawirro: Jammaame Iyo Dabaaldagga Ciidd
Magaalada Jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa kamid ah meelaha sida wanaagsan looga ciiday maanta, waxaana isugu soo baxay boqollaal ruux oo isuga jira qeybaha kala duwan ee bulshada. Dadka yimid musallaha salaadda, waxaa wejiyadooda laga dareemayay farxad aad u ballaaran, iyagoona ku labisnaa dhar cusub. Ciidamo katirsan […]
Sawirro; Magaalada Galhareeri Iyo Ciidul Fidriga.
Magaalada Galhareeri ee gobolka Galguduud ayaa maanta si heer sare ah looga oogay munaasabadda Ciidul Fidriga. Kumanaan qof ayaa fagaaraha weyn ee magaalada Salaadda ciidda ku tukaday waxaana halkaas khudbado ka jeediyay mas’uuliyiinta wilaayada iyo odayaasha deegaanka. Halkan hoose Ka Daawo Sawirrada Ciidul Fidriga Iyo Galhareeri.
Sawiro:-Yahuuda oo Qaza duqeysay iyo wararkii ugu dambeeyay ee Falastiin
Yahuuda ayaa Xalay duqeyn waxay ka geystay Magaalada Qaza iyadoo duqeyntaa loo adeegsaday Diyaaradaha Dagaalka waxaana lagu dilay ugu yaraan 22 ruux reer Falastiin ah. Duqeyta ayay Yahauudda Sheegtay in ay jawaab u tahay Gentaalo garab ka tirsan Ururka Xamaas oo weerarka Yahuudda Masjid Al aqsaa ka jawaabaya ay […]